Izindaba - Siyakwamukela ku-FIZA TECHNOLOGY
I-HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD ingumkhiqizi nomhlinzeki wamakhemikhali ohlanganiswe ngokuphelele. Sigxile ekukhiqizweni nasekuthekelweni kwamakhemikhali asetshenziselwa izinhlelo ezahlukahlukene kokuphakelayo, kumanyolo, kokudla, emikhakheni yokwelashwa kwezimboni namanzi, njenge-sodium chlorite, i-chlorine dioxide powder, i-chlorine dioxide tablet, i-chlorine dioxide gel, i-chlorine i-dioxide granular, i-nitrate ehola, i-sulfamic acid, i-barium carbonate, i-strontium carbonate, i-barium nitrate, i-fire assay crucible, i-fire assay cupel, Ukuzibophezela kwethu ekulandeleni umthetho kanye nenqubo ebanzi yemikhiqizo / yokunikeza iziqu kunika amakhasimende ethu ukuzethemba ukuthi imikhiqizo abayithengayo izofinyelela idinga ngokungaguquguquki. IHEBEI FIZA TECHNOLOGY CO igxile ekuhlangabezaneni nezidingo zamakhasimende ethu, ukwenza umnikelo omuhle emphakathini wethu nasekuvikeleni imvelo. Lokhu nakho kunikeza amathuba entuthuko kanye nempumelelo eqhubekayo yamakhemikhali kanye namakhasimende ethu.
Inkampani yethu inamagatsha amaningi nezisekelo zokukhiqiza ezweni lonke, enezindlela zokukhiqiza ezivuthiwe zamakhemikhali ezinto eziphilayo kanye namaqembu e-elite okukhiqiza. Inkampani yethu nayo ibisebenza embonini yamakhemikhali iminyaka eminingi, futhi ivolumu yokuthekelisa ihlala ihlala phambili embonini. Manje inkampani izuze ukusebenza okuhle kwebhizinisi futhi iwine imboni ephezulu idumela.
Sinezinto zokukhiqiza ezithuthukisiwe nobuchwepheshe, izindlela zokuhlola eziphelele kanye nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi, imikhiqizo yethu engaphezu kuka-80% ithunyelwa eYurophu, e-USA, eNingizimu Melika, eMid East, eSouth East Asia, ect.
"Lawula ikhwalithi ngokulawula isinyathelo ngasinye kahle, Thuthukisa insiza ngokusebenzela wonke amakhasimende kahle" kungukuzibophezela kwethu nokuzinikela kwethu kwesikhathi eside. Asigcini ngokunikezela ngayo yonke imikhiqizo ehlobene, kepha futhi ngentengo enhle kakhulu, insizakalo esezingeni eliphakeme yezobuchwepheshe kanye nenhle kakhulu ukuze ukwethembe.
Sithemba ngobuqotho ukubambisana nawe, ukwakha ubuhlobo obuhle be-develpoment evamile nokuchuma! Uma unesidingo sezimpahla zamakhemikhali, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi!